Shintsha phakathi kwesikrini sokuqala seWindows 8.1 kwiDesktop endala
Yenza ikhompyuter yakho ihambe. Ujonge kwiMetro Start screen, akunjalo? Ukubuyisa i-desktop yakho xa ukwisikrini seMetro Start, cofa nje okanye ucofe ithayile enkulu yeDesktop.
Ukubuyela kwisikrini seMetro Start kulula - yenza nje enye yezi zinto zilandelayo:
Cofa iqhosha leWindows kwikona esezantsi ekhohlo kwidesktop endala.
Cinezela iqhosha leWindows kwikhibhodi yakho okanye ucofe iqhosha leWindows kwikhompyuter yakho.
Cofa umtsalane wokuqala kwiCharms bar. Ibha yeCharms yipaneli encinci eneempawu ezimbalwa, ngasekunene. Ungena ngokuswayipha umda osekunene kwesikrini kude kubonakale ibha yeCharms: Beka umnwe wakho kwiscreen kwicala lasekunene kwaye uyihudulele embindini. Umtsalane wokuqala uphakathi.
Ukuba ungasuka kwidesktop yakudala uye kwiscreen seMetro ngokucinezela iqhosha leWindows, ungacinga ukuba ungaya kwelinye icala - ukusuka kwisikrini sokuqala ukuya kwidesktop endala - ngokucinezela iqhosha leWindows. Ngelishwa, ayisoloko isebenza ngaloo ndlela. Kukho isizathu sokuba kutheni, kodwa kunzima.
Ukushwankathela, ukusuka kwiscreen seMetro Start ukuya kwidesktop yakudala, cofa okanye ucofe i-Desktop tile. Ukufumana kwidesktop yakudala ukuya kwi-tiles Start screen, cinezela iqhosha leWindows okanye ucofe iqhosha leWindows kwithebhulethi yakho, okanye ucofe iqhosha lokuqala kwikona esezantsi ekhohlo kwidesktop endala.
Kubonakala kuphazamisa: Ngomzuzwana omnye ukwifayile (endala) yewindows; kunye nomzuzwana olandelayo udlala ngamaqhosha omnxeba. Imenyu endala ye-desktop Start ihambile, kwaye endaweni yayo kukho umngxuma omkhulu omnyama. Isikrini seMetro Start asenzi nantoni na njengemenyu yokuqala ehloniphekileyo. Kodwa, ngokwembono kaMicrosoft, yile ngongoma.
Ipilisi emhlophe ejikelezayo ip 145
Isikhokelo somsebenzisi se-iphone sedummies
ngaphezulu kwekhawuntari ye-bv
cholestyramine yokumiswa ngomlomo kwe-usp
intakumba edubulelwe iikati